JOMIC Yotarisirwa Kupetwa Zviri Pamutemo Kupera kwaNyamavhuvhu
Nyamavhuvhu 15, 2013
WASHINGTON — Boka reJOMIC, iro ranga richibatsira mukupomhodzwa kwemhirizhonga uye kuunza kugarisana muvanhu vemapato akasiyanasiyana, riri kutarisirwa kupedza kushanda zviri pamutemo kupera kwemwedzi waNyamavhuvhu.
Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti boka iri richapetwawo pari kupera kushanda kwezvimwe zvikamu zvebumbiro remitemo ranga riripo, sezvo munyika mava nebumbiro idzva.
JOMIC inonzi haisi mubumbiro idzva iri sezvo yakanga yaumbwa kuburikidza nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo rakare, (Ammendment 19) pasi pechibvumirano cheGlobal Political Agreement, icho chakaumba hurumende yemubatanidzwa.
Chinangwa cheJOMIC chaive chekuti iongorore kuteverwa kwechibvumirano chakaumba hurumende yemubatanidzwa.
Mumwe wemasachigaro eJOMIC, uye vari veMDC T, VaElton Mangoma, vatenda kuti JOMIC iri kupedza kushanda zviri pamutemo kupera kwaNyamavhuvhu. Asi vanoti pane tarisiro yekuti boka iri ribvumidzwe kuramba richishanda sezvo ranga richibatsira zvikuru.
Vanotiwo havasati vagara pasi semasachigaro emapato ari muboka iri kuti vakurukure nezve remangwana reJOMIC uye kuti kana isina kuenderera mberi vachaita sei nemidziyo yeboka iri.
Studio 7 yatadza kubata mamwe masachigaro eJOMIC, VaNicholas Goche veZanu PF naAmai Priscilla Misihairambwi-Mushonga veMDC-N kuti tinzwe maonero avo.
Asi remangwana reJOMIC harina kujeka sezvo panga patove nemutauro zvichitevera danho rakanga rotorwa neZanu PF muna Chikunguru rekuti yabuda muJOMIC ichiti midziyo yeboka iri haisi kushandiswa zvakanaka nemapato eMDC ari maviri.
Ukuwo hofisi yemutungamiri wenyika inoti motokari dzeJOMIC ngadzidzoserwe kumahofisi ayo. Hazvisati zvazivikanwa kana pane akatevedzera danho iri.